Hivarotra rano taterin’ny kamiao ny fanjakana, eto an-dRenivohitra sy ny manodidina, manoloana ny tsy fahampian’ny ranon’orana. Hisahana izany ny minisiteran’ny Angovo sy ny rano ary ny akoranafo. Efa naharitra andro maromaro ity tsy fahampian’ny famatsian-drano ity ary tsy misy ny vahaolana maharitra avy amin’ny Jirama.
Azo atao ny manapaka hazo kininina sy bolabolan-kazo, afa-tsy ny hazo sarobidy voaaro sady voafaritra ao anatin’ny lisitra iraisam-pirenena Cites. Ilaina kosa anefa ny mamboly hazo ho solon’ireo hazo tapahina. Tsiahivina fa nitaraina ireo mpandraharaha amin’nyhazo, tamin’ny fandraran’ny fanjakana ny fanapahana ny hazo rehetra, ka tao anatin’izany ny kininina. Hany ka nidangana izaitsizy ny vidin’ny sribao, antoky ny angovo fahandron’ny tokantrano Malagasy.
Voarara ny mivarotra solika fandrehitra mihoatra ny vidiny, efa voafaritry ny mpaninjara solika. Iharan’ny sazy ireo manararaotra minia mandika izany. Hovahana haingana ny fitaterana sy ny fitsinjarana ny solika fandrehitra sy ny solika rehetra. Fantatra fa ampy tsara any tahirin-tsolika eto amintsika.
Ampifanarahana amin’ny velirano ny tetibola 2020 mikasika ny sosialy sy ny fambolena. Nanome toromarika ny filoha Rajoelina, fa atao mifandraika amin’ny filan’ny vahoaka sy ny toe-javatra isaky ny faritra ny fandrafetana ny volavola tetibola. Hampitomboana ny vola ho an’ny sosialy sy ny fampiroboroboana ny fambolena.